सालको पात पछी कुलेन्द्र वि.क. र शान्ति रिजालको “फुलमा बस्ने भमरा” मा (भिडियो सहित) - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical online media
सालको पात पछी कुलेन्द्र वि.क. र शान्ति रिजालको “फुलमा बस्ने भमरा” मा (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । सालको पात टपरी हुने बोलको गीतबाट थप आफ्नो सांगीतिक यात्रालाई उचाइमा पुर्याएका गायक कुलेंद्र बिस्वकर्माको सुमधुर स्वरमा फेरी अर्को निकै आश लाग्दो गीत बजारमा आएको छ । शान्ति रिजालको प्रस्तुतिमा रहेको उक्त गीत “फुलमा बस्ने भमरा” बोलको रहेको छ । युवा अवस्थामा कसैले कसैलाई मन देखि मन पराउँछ भने उसले जिबनको सारा सर्वस्व उक्त प्रेमी अथवा प्रेमिकालाई सोची रहेको हुन्छ । यस्तै पेरिफेरीमा रहेको यस गीतलाई लय तथा शब्द सिर्जना लोकप्रिय सर्जक कस्तुप पन्तले तयार पारेका हुन् ।